Ukugqoka komshado ngamantombazane aphelele: yini okufanele ukhethe
Ngosuku olubaluleke kunazo zonke empilweni yentombazane, ufuna ukubukeka omuhle hhayi kuphela kumnikazi wamafomu okunethezeka, kodwa nakwabesifazane ngokugcwele ngokugcwele. Ngokusobala ukuthi lokhu kwacaca, sanquma ukwenza umqondo ophelele wemigqoko yomshado, eyobe ilele emzimbeni wamantombazane enamafutha.
Masinyane wenze ukubhuka ukuthi lesi sihloko sizocabangela kuphela izinto ezintsha ezibalulekile. Futhi ukungabaza ukuthi inani elikhulu lezixazululo zokuklama liye ladalwa, ngeke kwenzeke, ngoba izindlu zokuklama zaseYurophu ziye zagcizelela kakhulu ukuthuthukiswa kwemibono emisha neyingqayizivele yabashadikazi.
Umbala wesigqoko somshado wesifazane omncane
Ubuhle bombala nemibala yisici esiyinhloko seminyaka eminingi. Uma ungumnikazi webunjwa obuhle kakhulu, khona-ke ungabheka ngokuphepha ukhilimu, umbala ohlaza okwesibhakabhaka noma okhanyayo. Ungesabi ama-classics ombala omhlophe, esikhathini eside esidlule wafaka umlando wokuthi lo mbala ugcwele. Khumbula njalo, ingubo, ehambisana nokunambitha, izogcizelela kuphela isithunzi sakho, isibonelo, amabele akho e-chic.
Amantombazane angamaqhawe angakwazi ukunaka imbali ebomvu. Ihlale ihambisana futhi ibukeka nje imnandi. Ungakhetha inketho eyithakazelisayo - gqoka ingubo emhlophe ngemininingwane ebambekayo esikhwameni, isibonelo, umnsalo obomvana noma imbali emnyama. Le ndlela isisiza ekwenzeni umlenze wezinwele futhi ugcizelele ubuhle befomu lakho.
Isitayela nesitayela sokugqoka abesifazane abathandekayo
Ukukhethwa kwamamodeli kuyamangalisa - lo modeli ungakhethwa kalula ngokusekelwe kokuncintisana kwakho nezidingo zakho. Iqiniso likhona into eyodwa kodwa - kuzodingeka wenqabe iziketi zezingubo eziqondile, eziluhlaza futhi ezincane, njengoba zizokugcwalisa. Ngakho-ke ake sikhohlwe ngokudlulela ngokweqile futhi uye ezitayela ezifanelana nabesifazanekazi abahle kakhulu.
I-trapeze yembatho efinyelela phansi. Kuphelele kumakoti abafuna ukugxila emabele abo. I-trapeze inikezwa ngabakhiqizi abaningi - isibonelo, iCarolina Herrera - indlu yefashini lapho bangenza khona imikhuba.
Inhlanzi, igama lesibili le-mermaid yisitayela sabesifazane abanamabele amnandi neziqhwa ezilinganayo. Indwangu ibheka umxhwele kakhulu emzimbeni, imelwe cishe yonke imiqoqo yomshado yamakhuthazi adumile. Ikakhulukazi le ndlela isetshenziselwa ukuqoqwa kwezindlu zendlu yeVera Vang. Kule nkathi, amantombazane abheka izinhlobo ezikhangayo ezikhangayo, angakwazi ukukhetha izinhlanzi.
I-a-silhouette - i-highline ephakeme iyoba yinto yangempela yokuthola abesifazane abakhulu. Lezi zigqoko zibuye zigcizelele esifubeni. Izigqoko zale minyaka zaziyizibambiso ezinhle, ngoba amantombazana ayencane okumele akhethe.
Izigqoko zesitayela sesiGreki zifaneleke ngokuphelele lapho kwenzeka ukugcizelela isifuba. Imfashini igxilisa ukunakekelwa kwayo, ukuthanda uthando futhi ngaphandle kobunzima kufihla zonke iziphambeko ezibonakalayo zalesi sibalo, kanye nakho konke, kuyasebenza futhi kulula.
Labo abanesithakazelo ekuhlukahlukeni okukhulu kwezingubo zabafazi bamazinyo amakhulu banganakelela amamodeli amancane nomoya ngesitimela. Kulo nyaka, isitayela sizoqhubeka sinqobe izinhliziyo zabesifazane, kholwa yi-Christian Dior, u-Alberta Ferretti nabanye abaningi.
Enye izingubo zokugqoka ezinezindlela eziyinhloko. Ukunakekelwa kwalabo abakhona kuyogxila esikhwameni esihle, hhayi emaceleni omakoti. Enye kanye nemigqomo ibheka kakhulukazi. U-Blumarine uphelele ngokugcwele kulo msebenzi futhi ngokugcwele wadlulisa umphumela.
Kuyoze kube nini ukukhetha ingubo yomshado?
Lena ingenye yemibuzo esemqoka ebuza abashade ngokwabo ngamafomu okubabayo. Ukunikeza impendulo kuso kulula. Uma ungumnikazi wesifuba esinobuciko futhi unemilenze enhle futhi engeyona imile kakhulu, ungafaka ngokuphephile inguqulo emfushane. Kwezinye izimo, kungcono ukukhetha inguqulo ende.
Kodwa-ke, ukugqoka abesifazane abagcwele banenzuzo eyodwa enkulu - lena yi-bodice. Ama-couturiers amaningi adumile avumelana ukuthi kubalulekile ukugxila ikakhulukazi endaweni ye-decollete - ukukhetha ngqo i-toplatte, eyokugcizelela kakhulu ubuhle besifuba. Isiketi kufanele sihlanganiswe nesiketi: ekuqaphele lokhu, abaklami banikeza okukhethwa kukho kuphela okuphakathi.
Ngamafuphi, uma ucabangisisa ngezindlela ezihlukahlukene zezitayela, izitayela nemibala evezwe namuhla, awukwazi ukuthenga ingubo yomshado evelele yintombazane enobunjwa obuhle kakhulu. Izithombe zokuqoqa imfashini yibufakazi obunhle bokuthi. Into eyinhloko ukuthi akudingeki ukhathazeke ngabashadikazi ngamafomu amahle kakhulu - azoya phezulu ngendlela engcono kakhulu.
I-Business Womens Clothing
Indlela yokukhetha ibra elilungile
Wedding igqoka ngesithombe
Ijaji labesifazane: umlando wokubukeka, imithetho yokugqoka nokuhlanganisa
Isiketi se-sunny: ukuma kwangempela kwanoma yikuphi ukuma
Ukubunjwa ngobumba kubantwana
Ukudla okulinganiselayo nokuphephile
Isibi esibuhlungu sika-Edith Piaf
Indlela yokugcoba inja yamakhosi endala?
Isinkwa sezinyama nge-pasta yokugcwalisa
Isaladi nge-avocado kanye ne-saumon
Izimpawu zabesifazane namadoda
Ama-puzzle angqondweni, kuphela ku-1 ku-50 kuphela obhekene nawo. Ungakwazi yini?
Indlela yokugwema ukushisa kwelanga ehlobo
Kish nama cherry
Indlela yokulungisa amazinyo akho ekhaya?
Isimo Sezulu eMoscow nasifundazweni saseMoscow ngoJulayi 2017 - isibikezelo esivela kwi-Hydrometeorological Center
Ngingayisebenzisa iminyaka emingaki?